Football Khabar » फ्रान्स र क्रोएसियाविरुद्ध खेल्ने पोर्चुगलको टोली घोषणा : को–को परे ?
फ्रान्स र क्रोएसियाविरुद्ध खेल्ने पोर्चुगलको टोली घोषणा : को–को परे ?
युरोपियन देश पोर्चुगलले आगामी तीन खेलका लागि राष्ट्रिय टोली घोषणा गरेको छ । आज प्रमुख प्रशिक्षक फर्नान्डो सान्तोषले आगामी तीन अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि २५ सदस्यीय टोली घोषणा गरेका हुन् । यसपटक पनि टोलीको कप्तानी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले नै गर्नेछन् ।
पोर्चुगलले यस चरणको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रेकमा एक मैत्रीपूर्णसहित तीन खेल खेल्ने तालिका छ । पहिलो खेल नेपाली समयअनुसार नोभेम्बर १२ तारिखमा आन्डोरासँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ । त्यससपछिका दुई खेल युइएफए नेसन्स लिगका खेल हुनेछन् । जसमा नोभेम्बर १५ तारिखमा फ्रान्ससँग आफ्नो भूमिमा हुनेछ । यसअघि फ्रान्ससँगको खेल ०–० मा टुंगिएको थियो ।
त्यसपछिको खेल क्रोएसियाविरुद्ध उसकै भूमिमा हुनेछ । यो खेल नोभेम्बर १८ तारिखमा हुनेछ । पोर्चुगलले ८ दिनको बीचमा ३ खेल खेल्नेछ । नेसन्स लिगमा हाल पोर्चुगल लिग ए–समूह–३ अन्तर्गत शीर्ष स्थानमा छ । उसले यसअघिका ४ खेलमध्ये ३ खेल जितेर १ खेल बराबरी गरेको छ ।
पोर्चुगलको घोषित टोलीमा रोनाल्डोसहित इंग्लिस क्लब उल्भ्सका नेल्सन समेडो, सोही क्लबका राफाएल गुरेरियो, इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीका बर्नान्डो सिल्भा, सोही क्लबका जुआओ कान्सेलो, इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडका ब्रुनो फर्नान्डेज, स्पेनिस बार्सिलोनाका युवा स्टार ट्रिनकाओ, इंग्लिस क्लब लिभरपुलका डिएगो जोटा, स्पेनिस क्लब एथ्लेटिको मड्रिडका जोआओ फेलिक्ससहितका खेलाडी परेका छन् ।
यस्तो छ पोर्चुगलको घोषित टोली:
प्रकाशित मिति २० कार्तिक २०७७, बिहीबार १९:१७